Molo ngomama Discover ➡️ Fumana kwi-Intanethi ▷ ➡️
Umama wethu ngowona mfazi ubalulekileyo kubo bonke, kuba nguye osinike ubomi. Usithanda kakhulu kwaye yiyo loo nto kufuneka simbonise ukuba simthanda kangakanani. Kungenxa yoko le nto sabelana ngala mabinzana ukukubonisa olona thando lwethu lunyanisekileyo.
1 Molo mama
2 Molo mama uthixo akusikelele
3 Amabinzana athi mama kwimihla yakhe
4 Molo mama iividiyo
Ngobuncwane bobomi bam, ungumama wam wokhuseleko. Ubenosuku olumnandi kakhulu.
Ungoyena mama ubalaseleyo emhlabeni kwaye ndikunqwenelela usuku oluhle.
Mama, ube nosuku oluhle, ungumntu onzima ukulibala, kuba ndihlala ndikuthwala engqondweni yam.
Mama othandekayo. Ndihlala ndikuthwala engqondweni yam nasentliziyweni yam. Ndikunqwenela usuku oluhle.
Mama, awuyazi indlela endikuthanda ngayo, ndiyakukhumbula kwaye ndicinga ngawe. Unosuku oluhle.
Molo kusasa mama. Yiba nosuku olumnandi. Ndiyakuthanda
Mama, ngalo lonke ixesha ndidlula epakini ndiyakhumbula indlela endandonwabe ngayo njengomntwana. Ube nentsasa emyoli kwaye ngekhe ndikulibale.
Molo mama othandekayo, ndinqwenela nikuvuyela oku kuphuma kwelanga. Ndiyakuthanda
Mama, ungalibali ukuqala usuku lwakho olutsha ngeengcinga ezintle, ukhetheke kakhulu kum. Ndikuthanda kakhulu.
Ukuphila usuku oluhle njenganamhlanje, vala amehlo akho kwaye uvule ingqondo yakho kwizinto ezintle ezinokubonelelwa bubomi. Ndiyakukhumbula mama.
Mama, awuyazi indlela endivuya ngayo kukhathalelo, uncedo kunye nothando, enkosi ngolonwabo lwam lobuntwana ecaleni kwakho, ndiphila izinto ezintle kakhulu. Yiba nosuku olumnandi.
Mama, khumbula ukuba ndihlala ndikuthwele entliziyweni yam, ngekhe ndikulibale, iinkumbulo zobuntwana bam zisengqondweni yam, ibilixesha elimnandi kakhulu ebomini bam. Ndikunqwenelela usuku olumnandi.
Mama, lixesha lokuba ndikuxelele ukuba ndinombulelo ngayo yonke into ondenzele yona, ukusukela ebuntwaneni bam ukuza kuthi ga kweli nqanaba lobomi, undinika inkxaso yakho yezemali kunye noncedo lwabantwana bam, abo ubanikele kubo uninzi lobomi bakho. , ndibanyamekele ukuze bangasweli nto, ngekhe ndiyilibale. Ubenemin emyoli.
Molo mama uthixo akusikelele
Ndiyabulela ngomama ngamnye, uthando lwakho, ingcebiso yakho, uthando lwakho, ndiyakucela ukuba undixolele ukuba ndikubangela iingxaki ezininzi, ndiyazi ukuba undikhathalele njengokuba ndikhathalele nawe, Usuku lomama olonwabileyo.
Ndikhumbula ngothando umama wam omhle, kuba kum ubeyintyatyambo eyenza imihla yam yonwabe, eyona intle kakhulu yeentyatyambo kwaye ngaphandle kwamathandabuzo yeyona yam intanda kakhulu kobu bomi.
Mama uyinto ebaluleke kakhulu kum, umzekelo wam wobomi, osoloko endikhathalela nalowo undincedayo ukuba ndiziphucule yonke imihla.
Ubomi bam buhle kuba ndingabuphila ecaleni kwakho, Mama, ndiyabulela ngala mizuzu xa sihleka, xa silila, xa sikunye, ndiya kubaxabisa ngothando kuba ubusoloko ukuzo.
Kuzo zonke iintsikelelo athe uThixo wandinika zona kobu bomi, ukuba nawe ebomini bam, Mama, ngaphandle kwamathandabuzo yenye yezona zilungileyo.
Unika yonke into ungakhange ubuze nantoni na, ndiyabulela ngokuba ungubani, enkosi ngokuba ngumama wam, usuku olumnandi.
Uhlala unothando lokuxolela, vula iingalo zokundikhathalela, enkosi ngalo mama, uya kuhlala uyingcebo yam enkulu.
Unikele konke ngenxa yam, ubundikhathalele, undikhokele kwaye nangoku undikhathalele, andinawo amazwi okubulela ngayo yonke into oye wayincama ngenxa yam, ndiyakuthanda kwaye ndiya kuhlala ndikwenza njalo, mama.
Ndiyazi ukuba bekungekho lula ukuba undikhulise kwaye undifundise indlela eyiyo, kodwa ubuzimisele ukuzincama ngenxa yam, enkosi.
Ndiyamthanda kwaye ndiyamthanda umama ongazange anikezele kwaye angadinwa kukulwa, ndiziva ndisikelelekile ngokuba nomama omangalisayo.
Ngu inkwenkwezi Okhanyisa indlela yam, mhle kwaye womelele, ngaphakathi nangaphandle, ngumama wam osoloko endikhuthaza ukuba ndibengaphezulu yonke imihla.
Amabinzana athi mama kwimihla yakhe
Enkosi ngokuba kukukhanya kobomi bam, mama, ndikuthanda kakhulu.
Undinike ubomi, wandinika intliziyo yakhe nothando lwakhe infinito, uyinkwenkwezi yeentsuku zam zobumnyama kwaye ndifuna ukuba abenam yonke imihla. Enkosi Mama.
Ndiyabulela kuThixo ngokuba ndisenaye umama, enkosi ngokuba ndisengakwazi ukumgona ndimxelele indlela endimthanda ngayo.
Ngoyena ugqibelele, ugqibelele, ulilungu kwaye inkuthazo yam ngobomi ngumama wam.
Ukuba bekukho obunye ubomi, bendiya kucela into enye kuThixo, ukuba umama abe nam kwakhona.
Indlela yam yokwenza izinto, ukuthanda kwam, indlela enditya ngayo, mna nomama sidibene.
Ndiyamthanda umama kakhulu, amaxesha amnandi namabi ndiwagcina entliziyweni yam kuba ekugqibeleni ndiyazi ukuba umama ungoyena ulungileyo.
Mama, andiqondi ukuba ubomi bam banele ukuba ndikwazi ukubulela ngayo yonke into ondenzele yona, ndiyabulela ngokuba nguwe ondinike ubomi.
Kwaye xa bendidinga igxalaba, undinike umhlaba, enkosi mama ngokundikhathalela lonke eli xesha.
Ungumntu obaluleke kakhulu ebomini bam, uhlala kwindawo ebaluleke kakhulu entliziyweni yam, kwaye ungumama omangalisayo.
Ndiyakholelwa ukuba andinakuze ndikwazi ukuhlawula yonke into ondenzele yona, undenze umntu olungileyo, wandikhulisa ngothando nothando, undikhusele ngamaxesha anzima, kwaye namhlanje ndifuna ukukuxelela: Ndiyakuthanda kakhulu mama.
Mhlawumbi izinto ziya kuphela ngolunye usuku, kodwa ndikholelwe, Mama, ndiya kuhlala ndikuthwele entliziyweni yam nasengqondweni yam, njengokukhanya okukhanyisa ubomi bam.
Uyinto ebaluleke kakhulu ebomini bam, wena nawo onke amaxesha amahle esiwachitha kunye, ndiya kuhlala ndibakho, enkosi mama.
Enkosi ngokundikhathalela, ngokukholwa kum, ngokundithanda ndinje, ngokucebisa ngokundinika nina nonke, olu suku lubalulekileyo ndifuna ukwabelana nani, Usuku olumnandi.
Molo mama iividiyo